QALABKA BEERAHA EE BEERAHA IYO BEERTA BEERAHA FEBARAAYO 2019: MAALMAHA UGU FIICAN EE BEERITAANKA - KALANDARKA BEERAHA LUNAR
Ugu Weyn Ee Kalandarka beeraha Lunar
Lunar Sowing Calendar ee Febraayo 2019
Doorashada waqtiga loogu talagalay dalagyada, ku-tallaalidda, gooyo iyo geedo kale oo beerta iyo beerta, bacriga inta badan fiiro gaar ah u ah kalandarka dayaxa. Wejiyada dayaxa waxay saameyn ku yeelanayaan habka uu geedku uga soo horjeedo faragelinta dibedda si qaas ah. Jardiiniyeyaasha Bisha Febraayo ee sannadka 2019 iyo maalmo wanaagsan oo loogu talagalay shaqooyinka beerta - hoos ku akhri.
Qodobbada Zodiac iyo saamaynta lunar beerashada
Marka laga soo tago xaaladaha cimilada ee wanaagsan iyo agrotechnology habboon ee beerashada, horumarka iyo fruiting ee dhirta waxaa saameyn ku leh wajiga hadda ee dayaxa iyo qalabka jilibka ee ay ku taal. Qeexitaanka talooyinka beerta beerta oo isha ku haysa wajiga bisha ayaa la yiraahdaa habka loo yaqaan 'synodal'.
Dhaqdhaqaaqa dayax-gacmeedka, sida laga soo xigtay tiro ka mid ah saynisyahannada, waxay saameeyeen dhaqdhaqaaqa casiirka khudradda. Qiyaasta koritaanka iyo sicir bararka, jawaab celinta dhaawaca iyo saameynta aan caadiga ahayn waxay ku xiran tahay tan. Iyadoo ku xiran tahay tan, bannaanka ayaa go'aaminaya haddii ay suurtagal tahay in la beero, dib u soo celin ama dhirbaaxo geedka maalin gaar ah.
Ma taqaanaa? Kalandarka ugu da'da weyn waxaa adeegsaday wakiilo ka socda dhaqanka Orignac, oo ku noolaa dhulka Jarmalka iyo Faransiiska casri ah 32-26 kun oo sano ka hor. Kuwaasu waxay ahaayeen lafihii xayawaanka iyo dhagaxyada oo ay la socdaan miisaankooda.
Faahfaahin sax ah oo ku saabsan fal-celinta beerta iyo dalagyada dhirta laga helo ayaa muujinaya habka wax looga qabto. Waxay ka kooban tahay qeexidda dayaxa ee kuuliyadda jilicsan. Dhammaan calaamadaha miyirku waxay u kala qaybsan yihiin heerka bacriminta. Calaamadda bacriminta oo badan, dalagga intaa ka badan ayaa lagu beerayaa maalintaas. Sidaa darteed, si loo go'aamiyo habboon iyo maaha maalmaha ugu wanaagsan ee beerto iyo transplanting dhirta, waxaa lagugula talinayaa in la tixgeliyo wajiga bilaha iyo istiraatijiyada zodiacal ee dayaxa ku yaal.
Fikradda ah in wejiyada dayaxa ay saameeyaan adduunka dhirta ayaa leh labada taageerayaal iyo kuwa ka soo horjeeda. Dhammaan saynisyahannada iyo faqriyadu maaha mid muhiim u ah jadwalka kaluunka. Si kastaba ha noqotee, saameynta satellite-ka ee dhulka iyo nolosha xitaa waa mid aan loo dulqaadan karin. Sidaa daraadeed, wareegga jirka ee jirkiisu wuxuu keenaa ebb iyo socodka. Wuxuu saameeyaa dayaxa iyo jidhka aadanaha.
Caafimaadka jidhka iyo maskaxda ayaa ka sii daraya ama sii wanaajiya xilliga uu bisha bilawdo waji aan fiicnayn ama wanaagsan u ah jirka bani'aadamka. Gaar ahaan saameeynta digniinta satalaytka dadka u nugul saameynta dibedda iyo isbeddelka cimilada. Sidaa darteed, waxay xaqiijinaysaa xaqiiqda ah in dadka nool ay dareemaan dhaqdhaqaaqa jidhka dushiisa.
Ma taqaanaa? Dhulka Ruushka casriga ah, cilmi-baaristu waxay arkeen kalandarka dayaxa, 18 kun oo sano. Waxa la helay intii lagu guda jiray baadhitaan kudhacay magaalada Achinsk ee xaafadda Krasnoyarsk ee goobta Achinsk Paleolithic.
Xaqiiqada malayshiyada waxaa lagu xaqiijiyay in ay beerta naftooda. On khibrad shaqo, waxaa la caddeeyay in dalagyada beeray on dayaxa sii kordhaya koraan iyo soo saaro dhalid weyn. Isla mar ahaantaana, dhirta ayaa si adag loo beeray on dayaxa cusub, si liidata rujin iyo mid aan fiicnayn.
Beeralayda ayaa ku kalsoon in ay ku kalsoon yihiin kali talooyinka. Haddii saameynta dayaxu u muuqato jir ahaan iyo qiyaas ahaanba, markaa xiriirka u dhexeeya dhalidda iyo calaamadda jiliyada ayaa loo tixgelin karaa astaamo badan. Dhibaatadu waxay sidoo kale beenisaa xaqiiqda ah in xogta ku saabsan kala-soocidda calaamadaha ay ka duwan yihiin. Qaar ka mid ah astrologers waxay tilmaamayaan qaybta xukunka. Sidaa awgeed, waxay u kala qaybsan yihiin jodwada maskaxda afar qaybood oo kala duwan sida ku xusan qodobada. Tani waa waxa xaddidaya saameyntooda. Khabiiro kale ayaa u qaybiya si kale. Qeybinta waxay u qaybsan tahay shan kooxood sida ku xusan heerka bacriminta. Si kastaba ha noqotee, beeralayda ayaa sidoo kale isticmaala wejiyada zodiacal. Xaaladaha qaarkood, saameyntooda ayaa sidoo kale la xaqiijiyay.
Qodobka Lunar ee ninkii beerta ka shaqaynayay iyo gardarrada loogu talagalay Febraayo 2019
Kalandarka bilaha ah wuxuu ka duwan yahay xisaabta caadiga ah ee bilaha iyo toddobaadka. Waxay ku saleysan tahay dhaqdhaqaaqa dayax-gacmeedka ku yaalla Dunida. Taasi waa sababta jadwalka lacaga ee bisha Janaayo ay ka duwan tahay jadwalka bisha Oktoobar, Disembar iyo bilooyin kale.
Kalandarka bisha Febraayo 2019 ayaa toddobaadkii u eg sidan.
Taariikhda, Maalinta Lunar Wajiga bisha Shaqo lagu taliyey
1, 26/27 Hoosudhaca xornimada Iskuday dalagyada xididada, shimbiraha quudinta, dhirta gooyaa
2, 27/28 Hoosudhaca xornimada Mastar gacmaha, roodhiyada iyo kabaha, hubinta khudradda la keydiyo, geedo la jarayo
3, 28/29 Hoosudhaca xornimada Caleemaha xidid, nadiifinta nadiifinta, xakamaynta cayayaanka
4, 29/30 Hoos u dhigo Aquarius Qodashada ciidda
5, 30/1/2 New Moon ee Aquarius Way fiicantahay inaanad shaqeynin
6, 2/3 Kaga kobcinta cayayaanka Goynta geedo, nadiifinta waddooyinka beerta
7, 3/4 Kaga kobcinta cayayaanka Beeridda geedo, dayactir alaabada
8, 4/5 Kaga kobcinta cayayaanka Beeridda geedo, baaritaanka lagu koriyo
9, 5/6 Kordhinta Aries Diyaarinta bacriminta, quudinta shimbiraha
10, 6/7 Kordhinta Aries Ciid dabacsanaa oo lagu koriyo, hubinta maqaasiinka
11, 7/8 Koritaanka Taurus Beerto geedo, iibsashada bacriminta
12, 8/9 Koritaanka Taurus Beeridda geedo, majarafado iyo kabo
13, 9/10 Qaybta koowaad ee Taurus Goynta geedo, xakamaynta jiirka, ka saarida laamaha la qaboojiyey
14, 10/11 Horumarinta Gemini Qodista dhulka ee lagu koriyo, quudinta shimbiraha
15, 11/12 Horumarinta Gemini Diyaarinta compost, gadashada abuurka saxda ah, hubinta maqaasiinka
16, 12/13 Koritaanka Kansarka Goynta geedo, nadiifinta dayrka barafka
17. 13/14 Koritaanka Kansarka Beerto geedo, iibsashada qalabka beerta cusub
18, 14/15 Horumarinta Leo Diyaarinta bacriminta compost, iibsashada wax beerto
19. 15/16 Dayaxa oo buuxa Way fiicantahay inaanad shaqeynin
20, 16/17 Hoos-u-dhac ku yimaada Goobta Diyaarinta bacriminta compost, kuleylka dheer ee geedaha midhaha
21. 17/18 Hoos-u-dhac ku yimaada Goobta Loosinta ciidda ee aqalka dhirta lagu koriyo, wax soo saarka iibsashada, maqaas gareynta iyo qolalka hoose
Taariikhda Maalinta Dayaxa Wajiga bisha Shaqo lagu taliyey
22, 18/19 Dhimista Libra Gooyo, geedka geedo
23, 19/20 Dhimista Libra Abuuritaanka geedaha, geedo qoyan
24, 20 Yaraynta kubbadda Xoqin, gawaarida
25, 20/21 Yaraynta kubbadda Ka saara laanihii hore iyo qallalanba geedaha, geedo geedka
26, 21/22 Saddexaad Saddexaad ee Sagittarius Daaweynta ka hortagga cudurada iyo dulin, shaqo diyaarin leh abuur
27, 22/23 Yaraynta Sagittarius Xoqidda dalagyada xididada, quudinta shimbiraha, nadiifinta sawirka
28, 23/24 Hoosudhaca xornimada Geedo nadiifin ah, geedo beerid
In la ogaado wejiga dayaxa iyo qalabka dayax-gacmeedka ah ee dayax-gacmeedka ku yaala maalin gaar ah, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in dhirta ay tahay mid nugul. Bannaanka Tani iyo go'aamiyo taariikhaha wanaagsan oo aan wanaagsaneyn.
Maalmihii ugu fiicnaa ee lagu beero iyo daryeelka iyaga
Marka la eego taariikhaha kor ku xusan iyo u hoggaansamidda wejiyada dayaxa iyo calaamadaha jilitaanka, waxaa suurtagal ah in la ogaado maalmo wanaagsan oo loogu talagalay beeridda, beeritaanka, beerista iyo jaridda.
Isku taxadara sidoo kale maalmaha shaqooyinka noocaas oo kale ah:
Nidaamka Maalin aad u wanaagsan
Beeridda geedo iyo beeritaanka 6-8, 11-13, 16-17
Qalabeynta, guntinta 1-3, 22-25, 28
Waqtiga wakhti ee shaqada 4-5, 19
Waa muhiim! Maalintii 19aad ee dayaxa oo buuxa, waad goosan kartaa, laakiin dhammaadka jiilaalka qoyaanka badan ee dalagyada waa mid aan macquul ahayn. Laakiin haddii aad koraan dhirta miraha sanadka oo idil ee aqalka dhirta lagu koriyo, taariikhdani waxay ku haboon tahay goosashada.
Kormeerida jardiinooyinka jaalaha ah iyo beerta
Jadwalka kudhowaad jadwalku wuxuu ku salaysan yahay marxaladda qadada iyo kan hadda jira. Waxyaalahaasu waa muhiim maaha si gaar ah, laakiin waa isku wada mid.
Go'aaminta waqtiga beerto, gawaarida iyo jarista waa in lagu saleeyaa heerka wajiga uu yahay:
Koraaya Marka dayax-gacmeedka Dunida uu ku jiro marxaladda koritaanka, casiirka dhirta waxay bilaabaan inay si firfircoon uga soo baxaan nidaamka asaasiga ah ee caleemaha iyo miraha. Waxyeello kasta oo afkoda, caleemaha ama xididdada ka bogsada si ka dhaqso badan sida caadiga ah. Muddadan, beeridda miraha waxaa lagu dhiirigelinayaa. Tani sidoo kale waa mudo wanaagsan oo loogu talagalay geedo beerista si meel joogto ah. Kobcinta wanaagsan ee dayaxa waxay saameysaa geedo waaweyn iyo caws. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dalagyadaasi ay u baahan yihiin qulqulka khudradda khudradda dusha sare leh. Haddii aad dooratid wakhtigii ay soo degeen, waxa fiican inaad fiiro gaar ah u yeelato mudada koritaanka bisha.
Dayaxa oo buuxa Haddii inta lagu jiro xilliga a fruiting mass soo noqoto dayaxa oo buuxa, waxaa ka wanaagsan inaad soo goosato maalintaas. Qalabeynta iyo manjooyin laguma talinayo. Beeridda iyo beeritaanka geedo sidoo kale waa istaahilaan sugitaanka.
Hoosudhaca Haddii dhirta dhirta kobcinta dhirta ay ka soo baxdo rhizomeka cawska, ka dibna bisha la yareeyo casiirka, liddi ku ah, ku noqosho rhizome. Dhirta waqtigan waa in ay ahaataa xididada iyo dalagyada dalaggu. Dhirta Kuwani waxay u baahan yihiin inay ku quudiyaan rhizomes. Taasi waa sababta dayaxa dayrta si wanaagsan u saameeyaa koritaankooda. Noocyada kale ee dhirta ayaa si fiican uga jawaab celiya waxqabadyada la xiriira daryeelka - samaynta, tallaalka, tallaalidda.
Dayaxa cusub Inta lagu jiro xilliga cusub ee bisha, waxaa lagula talinayaa in waxqabadka kaliya ee degdegga ah la sameeyo. Tusaale ahaan, waxaad la xiriiri kartaa warshad buka. Hannaanka soo hara waa in aan la fulin.
Waa muhiim! Qodobka ugu muhiimsan ee beereedka, beeridda, dib-u-guurista ama qaababka kale waa wakhtiga ay asalka u yihiin asalka. Maaha mid haboon in dib loo dhigo habka wakhti dheer, xitaa haddii jadwalka xilligaas la sheego. Kaliya waxaa loo ogol yahay 1-2 maalmood.
Sida laga soo xigtay goluhu wuxuu u jeedaa sida soo socota:
Calaamado aad u fiican. Kuwaas waxaa ka mid ah calaamadaha Taurus, Scorpio, Cancer and Pisces. Geedo lagu beeray muddadaa ama loo beddelaa meel joogto ah, waxay si firfircoon uga qayb qaadan doontaa miro. Wax-soosaarka miraha beeraha ayaa mararka qaar ka badan celceliska.
Calaamadaha cilladda. Waxaa ka mid ah - Libra iyo Waalid. Waxay saameyn yar ku leeyihiin fruiting, laakiin marka dayax-gacmeedka uu ku jiro qalabkan, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la beero iyo lagu beero dhirta.
Calaamadaha kalyaha. Liiskaan waxaa ka mid ah Virgo, Gemini iyo Sagittarius. Dalagyada beeray inta lagu jiro mudadan waxay dhalin doontaa midho, laakiin dhaliddu waxay ka yaraan doontaa celcelis ahaan.
Calaamadaha Barren. Tani waa Aries iyo Leo. Geedaha ayaa kori doona, laakiin waxay soo saari doonaan qadar yar oo dalagga ah. Qayb ka mida midhaha ayaa u badan inay u dhintaan, ama ugxansiisyada madow waxay abuuri doonaan.
Saxeexa barren. Aquarius waa calaamad ah in ay saameyn burbur ah on dhirta. Abuurka la beeray, waxay u badan tahay, ma kori doono, iyo geedo ma qaadan doonaan xidid inta lagu guda jiro qotodheerta.
Marxaladda soodhoweynta, oo ay weheliso qalabka dhismaha ee ku yaala dayax-gacmeedka, waxay muujinaysaa suurta-galnimada shaqada beerta. Sidaa darteed, maalinta uu bisha cusubi ku jiro calaamada Aquarius, waa in aadan faragelinin horumarinta dhirta oo ay ku beeraan abuurka geedo.
Haddii dayax sii kordhaya uu ku jiro mid ka mid ah calaamadaha bacriminta, tusaale ahaan, muraayadaha yaryar, Scorpio, Toros ama Kansar, beeridda iyo beeritaanka wuxuu si aad u saameyn ugu yeelanayaa horumarka dambe ee geedka.
Kalandarka dayaxa ee ninkii beerta ka shaqaynayay iyo gardarrada bilaha Maarso, Abriil iyo May 2019.
Calaamadaha Zodiac waxaa sidoo kale loo qeybiyaa qaybaha. Qof kastaa wuxuu mas'uul ka yahay nidaam daryeel oo gaar ah:
Biyaha (Cancer, Scorpio, Fish). Inta lagu jiro muddadaan, waxaa fiican in lagu beero dalagyada caleenta, samee hilling, geedo quus ah.
Earth (Taurus, Bikradda, Mujaahidiinta). Goobta calaamadaha dhulka calaamadda jilciyadu waxay raacdaa koritaanka dalagyada xididka, sidaas darteed maalmahaas waxay ku habboon tahay inay wax ka qabtaan baradho, karootada, malayga, iwm.
Dabka (Sagittarius, Aries, Leo). Xilliga xilliga dayaxa uu ku jiro xididada dabka, waxaa wanaagsan in lakabiyo yaanyada, qajaarka, dhirta miraha, digirta, berry.
Hawada (Aquarius, Gemini, Libra). Xilligan waa mid ku habboon beeritaanka iyo daryeelidda dhirta ubaxa ee ornamental.
Maalmahaas marka ay suurtagal tahay in la fuliyo wax-soosaarka ama hawlaha daryeelka beeraha, beeralayda ubax iyo beeraley ayaa lagula talinayaa in ay bilaabaan isku diyaarinta guga. Waxaad samayn kartaa nadiifinta dammaanadda, roogga barafka, iibinta bacriminta, ama qodida ciidda lagu koriyo.
Si kastaba ha noqotee, nidaamyada degdegga ah ayaa loo ogol yahay wakhti kasta. Kuwaas waxaa ka mid ah daaweynta cayayaanka iyo cudurrada. Haddii dhirta loo hanjabo dhimasho, ha u fiirsan marxaladaha dayaxa iyo calaamadaha maskaxda. Waxyeello aad u weyn oo sida xad-dhaaf ah laguma keeni karo. Taas bedelkeeda, buufinta iyo wakhtiga ku-tallaalidda cudurada waxay u badbaadin karaan geedka.
Iyada oo qoondaynta habboon ee khayraadka, beeralaygu ma lahaan doonaan dhibaatooyin xilliga jardiinka. Qodobbada labaad ee go'aaminta wakhtiga waxay noqon doontaa kalandarka dayax-gacmeedka. Thanks to aqoonta wajiga hadda ee dayaxa, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu si wax ku ool ah u saameeyn karaa dhalidda ama dhaqdhaqaaqa xididida dalag gaar ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kalandarka beeraha Lunar 2019